Google Home dia nanambara ho toy ny gadget ho axis afovoany ao an-tranonao | Vaovao momba ny gadget
Google Home dia mikasa ny handresy ny efitrano fandraisam-bahininao
Google Home dia nambara tao amin'ny I / O ary nanomboka tamin'io hetsika io dia tsy nahalala firy momba ny andinindininy sy ny fiasan'ity fitaovana ity izahay. Tamin'ny hetsika Google ora vitsy lasa izay, Google dia nanao namoaka ny antsipiriany rehetra, ao anatin'izany ny vidiny, ny andro fandefasana ary ny ampahany amin'ny fampiasa azy.
Ity fitaovana izay tonga hanafika ny efitranonao ity dia miasa miaraka amin'ny Google Assistant, hita ao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra Allo vaovao ary izany dia nanjary ny axis afovoan'ny Android; tafiditra tao amin'ny Google Pixel natomboka omaly ihany koa. Fitaovana misy fiasa tena manokana.
Miaraka amin'ny Google Home azonao atao tantano ny Chromecast, mametraha fanontaniana, mitendry mozika, mandefasa hafatra amin'ny fifandraisana na mamorona hetsika kalandrie amin'ireo hetsika maro hafa. Izy io koa dia manana fanohanana ny SmartThings, Nest IFTTT, ary ny fifehezana fitaovana marobe.
Eo an-tampon'ny Trano no misy ny LED amin'ny hazavana hampiseho ny lokon'ny Assistant manokana. Izy io koa dia manana fanaraha-maso mikasika ny fanovana ny feon-kira, ny mozika na ny fanamafisana ny fanekena ny feo. Izy io dia manana safidy ho an'ny fanaingoana amin'ny fototra hahafahantsika mampiditra azy ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Fa inona ny mozika, Spotify, Pandora, TuneIn, Eo ny Google Play Music sy ny YouTube Music, miaraka amin'ny safidin'ny Chromecast Audio sy ny fanohanana efitrano maro. Ny safidy lehibe indrindra amin'ny Karoka Google dia alamina ho an'ny mpampiasa, toy ny famakiana vaovao na podcast.
Google Home dia azo tehirizina avy amin'ny 129 dolara ao amin'ny magazay Etazonia ary ho tonga amin'ny 4 Novambra ao amin'ny magazay ara-batana ao amin'io firenena io. Ho an'ny ambiny, tsy maintsy miandry ny fotoana hanombohany azy isika tahaka ny nitranga tamin'ny vokatra hafa.
Fitaovana iray mifantoka amin'ny Internet amin'ny zavatra ary hahafahanao mifehy ny jiro lavitra, ny mari-pana sy ny fiarovana, ankoatr'ireo safidy rehetra ireo ho an'ny fialamboly sy famokarana, dia entina amin'ny resaka voajanahary miaraka amin'ny Google Assistant.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Google Home dia mikasa ny handresy ny efitrano fandraisam-bahininao
Animas OneTouch Ping insulant pump, tanjona vaovao ho an'ny hackers
Google Wifi, Chromecast Ultra ary Daydream View no vaovao Google hafa